Beta nke abụọ nke watchOS 2.2 dị ugbu a | Esi m mac
WatchOS 2.2 Beta XNUMX Dị Ugbu a
Apple malite maka mmepe ndị nke abuo beta nke watchOS 2.2 nke gosipụtara ihe ọhụrụ nke ụdị beta gara aga nke ụmụ okorobịa si Cupertino bidoro, ndozi ndị dị na ngwa Maps. O doro anya, ụdị ọhụrụ a na - emekwa ka nkwụsi ike na arụmọrụ nke sistemụ elekere dị mma, mana mmelite kachasị na - emetụta Maps.
Anyị na-anọgide na-ahụ nkọwa nke ihe ga-abụ ụdị nke usoro Apple Watch sistemụ ọzọ. Anyị nwere ike itinye ya mmezi na-abịa nke nta nke nta, ihe dị na Apple, mana echefula na ịwụpụ site na watchOS na watchOS 2 n'ihe gbasara ohere na arụmọrụ nke nche ahụ pụtara ìhè.
Site na ụdị beta ọhụrụ a gosipụtara na akụkọ ahụ ga-abata lekwasị anya na Maapụ maka Apple Watch. Mgbanwe ndị a Ha metụtara ihe mmasị (nke elekere na-egosi ugbu a) na nhọrọ nke ịchọ adreesị ma ọ bụ otu ebe kpọmkwem site na otu map ahụ na-enweghị iji Force Touch kwụsị ya yana igosi adreesị nke ụlọ anyị. ma ọ bụ ọrụ.
N'aka nke ọzọ, anyị ejirila ọtụtụ ọnwa were rumo nke ngosi nke ụdị ọhụụ nke Apple Watch, na nke a ọ ga-abụ Apple Watch 2, mana rue ọnwa Machị anyị agaghị ama ma ọ bụrụ na asịrị a bụ eziokwu ka obu na odighi. Nke abụọ asịrị ga-eweta ụfọdụ mgbanwe n'ime ngwaike nke ngwaọrụ ma ọ nweghị nke dị na mpụga, mana a ga-ahụ ya na-erughị ọnwa abụọ. N'ihi na oge anyị ga-enwe ndidi na olileanya na ọ gaghị ewe ogologo oge na eze ẹkedori a version 2.2 maka elekere ugbu a ma nwee ike ịnụ ụtọ ndozi ndị emejuputara ozugbo enwere ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » WatchOS 2.2 Beta XNUMX Dị Ugbu a
Ọrụ Titan ọ kwụsịla?
Apple weputara tvOS 9.1.1 Na Podcast App Maka New Apple TV